आमाको माया सबैलाई हुन्छ । आफुलाई जन्म दिएकी आमाको दयनीय अवस्था कुन चाहिँ छोराछोरीले हेर्न सक्छन् र ? मोरङ माइत भएकी अञ्जुको भर्खरै बुवा बित्नु भएको एक हप्ता भएको छैन,आमाको खुट्टाको अपरेशन गर्नुपर्ने समस्या आइपरेको छ । एक महिना अघिमात्र अस्पतालमा ३/४ लाख खर्च गरेर खुट्टामा स्टिल लगाएकी आमाको खुट्टामा पुनः समस्या
देखापरेपछि अञ्जुलाई अर्को ठुलो विपत आइपरेको हो । आमाको खुट्टाको अपरेशन गर्न मात्रै अझै डेढ लाख लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौंमै श्रीमानसंगै जागिर गर्दै आइरहेकी मोरङ केराबारी गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित अमृत चोक माइत भएकी अञ्जु पुरीले घर र माइत दुवैको घर खर्च धान्दै आइरहेकी थिइन् । तर लकडाउनले केही काम नभएको
बेला अलि अलि कमाएर बचाएको पैसा समेत बुवाको मृत्यु हुँदा काममै सकियो । लकडाउनले गर्दा काठमाडौंदेखि माइतसम्म पुग्न १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्‍यो । अलि अलि भएको पैसा सबै खर्च गरेरै सकियो । अहिले आमालाई आइपरेको समस्याप्रति उनी चिन्तित छिन् । आमाको खुट्टाको अपरेशनको लागि त्यत्रो रकमको जोह कसरी गर्ने भन्ने समस्याले उनलाई सताएको छ ।
घरको नाममा एउटा सानो झुप्रो छ । जग्गा पनि ऋणमा छ । बुवा धामी झाक्री गरेर कमाउनु हुन्थ्यो बितिहाल्नु भयो , अन्य दुई भाइ एक बहिनी सानै छन् । त्यही पनि अलि अलि खेतमा काम गरेर कमाउछन । आमाको अवस्था दयनीय छ। हिंड्न पनि सक्दिनन् एक महिना भयो थला परेको , अझै सुधार हुन सकेको छैन । घाउ पाकेर अपरेशन गर्नुपर्ने भएको
छ । उनी भक्कानिदै बुवाले त छोडेर जानुभयो अब आमाले पनि छोडेर जान लाग्नु भयो भन्दै दुखेसो पोख्छिन । चिकित्सकले तुरुन्तै शल्यक्रिया गर्ने सुझाव दिएपछि आमाको लागि कहि कतैबाट उपचारको बन्दोबस्त हुने भए मेरो आमाको ज्यान बच्ने थियो भन्दै सहयोगको अपिल गरेकी छिन् । गत चैतमा नोबेल अस्पताल बिराटनगरमा खुट्टाको अपरेसन गरेर
स्टिल लगाए पनि पछि फलो अपको लागि अस्पतालले अहिले कोरोना लाग्न सक्छ नआउनु भने पछि आमाको खुट्टाको घाउ झन बढ्दै गएको हो । अस्पतालले अहिले नआउनु भनेपछि घाउको रोग देखाउन विजयपुर अस्पताल देखाउन लगेकोमा तुरुन्त अपरेशन गर्नु भनेर चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । तर भन्ने बितिकै पैसाको जोगड कहाँ गर्न सकिन्छ र ? अहिले
त्यही समस्याले गर्दा आमा थला पर्नु भएको छ भने खुट्टा झन झन बिग्रिदै गएको छ । विजयपुर अस्पतालले आमाको अप्रेशनका लागि करिब डेढ लाख लाग्ने बताएको छ । अञ्जुले भनिन्, भर्खरै बुवामो मृत्युको भएको सबै खर्च सकियो अब आमाको लागि उपचार खर्च कसरी जुटाउने ? अञ्जुले सबै मानवीय मनहरुमाझ आमाको ज्यान बचाइदिन आग्रह गरेकी छिन् ।
आर्थिक सहयोग गरिदिन सबैसँग अपिल गरेकी छु, सानै भए पनि सहयोग गरिदिएर मेरो आमालाई बचाइदिनुहोला।
Posted in नेपाल
Prevखुसीको कुरा: अब पुलिसमा होचा पुडकाले पनि जागिर पाउने
Nextसंसद सचिवालयद्वारा सरिता गिरी पदमुक्त बनेको सूचना जारी, गिरीको सांसद पद चट